Saraakiisha oo ka hadlay weerarkii Garoonka Balli-doogle | Baydhabo Online
Saraakiisha oo ka hadlay weerarkii Garoonka Balli-doogle
Saraakiisha Militariga Somaliya ee ka hawlgala Garoonka Balli-doogle ee Gobolka Shabellaha Hoose, ayaa faah faahin ka bixiyay madaafiic ay Shabaabku shalay galab ku weerareen Garoonkaasi.
Ururka Al Shabaab, ayaa barraha afkooda ku hadla ku baahiyay in 35 hoobiye ay ku garaaceen Garoonka Balli-doogle, oo saldhig u ah Ciidamada Kumaandooska Somaliya iyo kuwo kale oo ka socda dalka Mareykanka. Shabaabku waxay sheegteen in duqayntaasi ay khasaaro buuran ku gaarsiiyen labada ciidan, sidoo kalana ay ku burburiyeen keyd ay leeyihiin ciidamadaasi.
Korneyl Cali Calasow, Taliyaha Guutada Lixaad ee Ciidanka Xoogga Dalka, ayaa beeniyay in 35 hoobiye ay Shabaabku ku garaaceen Garoonka Balli-doogle, isagoona qiray in saddex hoobiye oo qura ay ku soo tuureen, isla-markaana aanu jirin wax khasaaro ah oo ka dhashay. Wuxuu sheegay hoobiye-yaasha in ay ku dhaceen meel bannaanka ka ah Garoonka.
Taliyaha, ayaa tilmaamay in Shabaabku ay madaafiicda ka soo tuureen gaari uu noociisu yahay caasi/hoomey, daqiiqado gudahoodna ay kaga carareen goobtii ay madaafiicda ka soo tuureen.
Taliyaha oo la hadlay Idaacadda Kulmiye ee Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa uu xusay in hub culus loogu jawaabay Shabaabkii madaafiicda soo tuuray, loona soo sheegay in waxyeelo ka soo gaartay hubka lagu caabiyay.
Taliyaha oo la weydiiyay sheega-shada Al Shabaab ee ah in 35 hoobiye ku garaaceen Garoonka Balli-doogle, ayaa sheegay inaanay helinba fursad ay intaas ku tuuri karayan.
Su’aal ahayd sababta ay u daba geli waayeen Shabaabkii madaafiicda soo tuuray, haddiiba ay ka war helayn in gaari caasi ka soo dhex tuureen, ayuu sheegay in gaadiidkaasi ay adeegsadaan dadweynaha isaga kala goosha Gobolada Banaadir iyo Shabellaha Hoose, sidaasi daraadeedna ay ka hortaggayeen in gaari rakaab saaran yahay ay waxyeeleeyan.
Korneyl Cali Calasow, ayaa diiday in weerarkani uu wax saamayn ahi ku yeelan karo gulufka militari, ee la qorsheynayo in lagu qaado dhulka ay Shabaabku ka arrimiyan.
Wasiirka Warfaafinta Somaliya, C/raxmaan Cumar Cismaan (Yariisow), ayaa Khamiistii Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom ugu yeeray in ay u diyaar-garowban dagaal dhawaan lagu qaadayo Shabaab.